नागरिक धर्म! | मझेरी डट कम
editor — Sun, 12/21/2014 - 05:51
“यूरोपका गल्ली–गल्लीमा योभन्दा झ्कासको सडक हुन्छ रे!” सडक पार गर्न लागेका एक झुण्ड कर्णधारमध्ये सबभन्दा खाइलाग्दोले पेटीको गमलालाई फूटबल बनाउँदै भन्यो।
त्यसपछि म एक जोडी टेलिभिजनकर्मीप्रति आकर्षित भएँ, जो शहरीहरूको सडक संस्कृतिमाथि झ्कास कार्यक्रम बनाउने दृश्यहरू खिच्न लागिपरेका रहेछन्। सडक अनुशासनहीनता र बन्करपथवादी पथिकहरूको मतिमा अब बम खसान हुने भयो भन्ने सोच्दै हेर्न लागें। त्यत्तिकैमा क्यामेराम्यानले गथासो पोखे, “कताबाट खिच्ने खै? 'एङ्गल' नै मिलेन।” त्यसपछि संवाददाताको इशारामा हरियालीमा उक्लेका क्यामेराम्यानको माडीमैदान शुरू भयो। 'एङ्गल' मिलाउन थालेका क्यामेराम्यानले दूबोको नयाँ चौरलाई माडीमैदान बनाए। चिटिक्कको चौरले हेर्दाहेर्दै चिन्डे रूप धारण गर्‍यो।
२१-२७ मंसीर २०७१